San Zuren December 15, 2021 at 10:20 PM
ငါတို့ အချင်းချင်း ချစ်ကြပြီး (ဖေးမ) ကြမှာကို သူတို့က ကြောက်ကြတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ချစ်ခင် (ဖေးမ) ခြင်းကနေ သူတို့ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုကို ဖန်တီး နိုင်လို့ပါပဲ။
Aye Kay December 20, 2021 at 9:21 PM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 30, 2021 at 4:26 AM
32 5424 8384 8544 5856
naychi December 30, 2021 at 1:12 PM
Unknown January 15, 2022 at 5:24 AM
Dar Dar January 20, 2022 at 7:15 AM
Unknown February 17, 2022 at 6:22 AM
Lillian mon December 16, 2021 at 1:09 AM
Zin Mar Htwe December 16, 2021 at 2:44 AM
MT December 16, 2021 at 4:19 AM
Done ✅ thank goodness
Mon mon December 16, 2021 at 8:52 AM
Sammi December 16, 2021 at 8:02 PM
ဆရာ ​ပြောတဲ့ ၃ချက် မှတ်ထားပါ့မယ်
Sammi January 15, 2022 at 6:21 AM
အနှစ်ပြန်ချုပ်ရရင် လူတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိဖို့ဟာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေကို ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်နိုင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုမျိုး ဖြစ်ဖို့က သေချာစနစ်တကျ ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ Social influencer ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရုံနဲ့ ဖြစ်သွားနိုင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သူများကို လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တည်ဆောက်ခြင်းပါပဲ။ အဲ့လိုကျ မတည်ဆောက်ချင်ဘဲ၊ တည်ဆောက်ရကောင်းမှန်း မသိဘဲ နာမည်ကြီးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ နောက်ကိုပဲ လိုက်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်တွေ အလဟဿ ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ တံလျှပ်ကို ရေထင်ပြီး အလိုက်မှားတဲ့ ရွှေသမင်လေးတွေ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Su Su December 16, 2021 at 10:21 PM
Aye Shwe December 17, 2021 at 11:34 PM
Aye Kyaing December 18, 2021 at 5:09 AM
Ingyin December 18, 2021 at 7:12 AM
KhantGyi December 18, 2021 at 7:28 AM
Bo kyaw December 18, 2021 at 7:56 AM
Mon mon December 19, 2021 at 12:36 AM
TKT December 19, 2021 at 4:06 AM
Yuppie December 19, 2021 at 9:17 PM
Mon mon December 20, 2021 at 1:18 AM
Aye Zaw Thu December 20, 2021 at 3:33 AM
Aye Kay December 20, 2021 at 9:22 PM
Thu Zar December 20, 2021 at 10:27 PM
ThuuThuu December 20, 2021 at 11:41 PM
Unknown December 27, 2021 at 12:07 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 5:05 AM
ကမ္ဘာကြီး လုံးသည် ဖြစ်စေ
Unknown December 30, 2021 at 4:19 AM
Unknown December 30, 2021 at 4:35 AM
Billလေး အကူညီတောင်းချင်လို့ပါဗျ ပုံမှန်ဆိုလည်းမနက် နေ့ ည တိုင်းclickပါတယ်ဗျ ခုကသိန်း1သောင်း‌လေး အမှီဝုန်းချင်လို့ပါဗျ ပထမဆုံးအကူအညီတောင်းတာပါဗျ 962331079ပါဗျ 🙏🙏🙏
Thet Wai December 30, 2021 at 4:41 AM
M December 30, 2021 at 4:45 AM
May Htoo Sein January 15, 2022 at 7:11 PM
Unknown December 30, 2021 at 4:46 AM
Myo December 30, 2021 at 4:54 AM
Unknown December 30, 2021 at 4:57 AM
nyi hmue thwin December 30, 2021 at 4:58 AM
One day December 30, 2021 at 4:58 AM
zaylatt December 30, 2021 at 5:17 AM
MK Mobile Taunggyi(IT & Mobile Service) December 30, 2021 at 5:36 AM
卂ㄩ几Ꮆ Ҝㄚ卂山 Ҝㄚ卂山 December 30, 2021 at 5:38 AM
Unknown December 30, 2021 at 5:39 AM
Triple K December 30, 2021 at 5:59 AM
Please click more..💪💪
dawsawhla December 30, 2021 at 6:04 AM
NAK December 30, 2021 at 6:04 AM
ko Thet December 30, 2021 at 6:06 AM
Thu Ra Soe December 30, 2021 at 6:13 AM
Nway Oo Mhan December 30, 2021 at 6:14 AM
Unknown December 30, 2021 at 6:15 AM
Unknown December 30, 2021 at 6:37 AM
Sar twy phat lo ya ag ku nyi pr oo 😢
Zz December 30, 2021 at 6:37 AM
Unknown December 30, 2021 at 6:39 AM
kono dio da December 30, 2021 at 6:42 AM
Hla Hla Nue December 30, 2021 at 6:43 AM
Unknown December 30, 2021 at 6:49 AM
Billကူညီပေးကြတဲ့ clicker အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ အားလုံးအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ🙏🙏🙏
သိန်း1သောင်းတွက် အပီပြင်ဝုန်းပီဗျာ fighting❣️💪
AUNG December 30, 2021 at 6:52 AM
SD December 30, 2021 at 6:56 AM
Unknown January 15, 2022 at 7:24 AM
Unknown December 30, 2021 at 6:57 AM
ကြေငြာမတက်တဲ့သူတွေ VPN ပြောင်းကျိပါ တချို့ wifi တွေက USA ဆို ကြေငြာမတက်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်
UK CANADA ဘာညာ ပြောင်းသုံးကျိပါ
Unknown December 30, 2021 at 7:03 AM
Unknown December 30, 2021 at 7:10 AM
Unknown December 30, 2021 at 7:11 AM
Unknown December 30, 2021 at 7:12 AM
Kyaw Nyein Chan December 30, 2021 at 7:27 AM
⚠️⚠️ ညီ၊ အစ်ကို၊ မောင်၊ နှမတို့ရေ ⚠️⚠️
Applications တွေမှာ အရင်ရက်တွေက လူအရမ်းများပြီး ဒီရက်ပိုင်း လူ နည်းသွားတာကြောင့် invalid activity ဆိုပြီး သတိပေးစာ ရောက်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရှိတဲ့ လူတွေက အမှား ❌ ထပ်မဖြစ်အောင်
1. Learn more တို့၊ ကြော်ငြာတဲ့ Apps တွေကို install တာတို့ကို မလုပ်ကြပါနဲ့ဦး 👋👋👋
၁၅ စက္ကန့် (သို့မဟုတ်) ၃၀ စက္ကန့် ကြော်ငြာတွေကိုပဲ ကြည့်ပေးကြပါ 👍👍👍
2. Point တွေ ရချင်ဇောနဲ့ Auto clicker တွေ လုံးဝ လုံးဝ မသုံးကြပါနဲ့ 👋👋👋
ကြော်ငြာတက်တာ ကြာလို့ဆိုပြီး ၅ link လောက် ဆက်တိုက်နှိပ်ပြီး ၅ ခုလောက် ကြည့်ပစ်တာမျိုးလည်း မလုပ်ကြပါနဲ့ 👋👋👋
3. နောက်ပြီး တစ်နေကုန် ကလစ်နေတာတို့၊ ဘာတို့လည်း မလုပ်ဘဲ ၁ နာရီလောက်ပဲ အများဆုံးထားပြီး ကလစ်ပေးကြပါ 👆👆👆
ပြီးရင် ခဏနားပြီးမှပဲ ပြန်ပြန် နှိပ်ပေးကြပါ။ တောက်လျှောက် အများကြီး နှိပ်တာထက် ခဏခဏ နှိပ်ပေးတာက ပိုပြီး သဘာဝကျပါတယ် 👍👍👍
4. ခဏရောက်လာပြီး ပြန်ထွက်သွားကြသူတွေလည်း ဒီစာလေးမြင်ရင် ပြန်လာပြီး ကယ်တင်ကြပါဦး။ Apps ဖြစ်ဖြစ်၊ Web ဖြစ်ဖြစ် ပြုံခဲရောက်လာပြီး မကြာဘဲ ပြန်ထွက်သွားကြရင် ဒီဘက်မှာ အင်မတန်မှ ဒုက္ခရောက်ပါတယ် 🥺🥺🥺
ဒါကြောင့် ကူညီကြပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဒါလေးကို အဓိကအားကိုးနေရတာပါ။ နေ့စဉ်မပျက်လေးတော့ ဝင်ပေးကြပါ။ ၁ ခုခုဖြစ်မှ ဝင်လာတာမျိုး မလုပ်ကြပါဘဲ နေ့စဉ် ဝင်ရောက်ပေးကြပါ။ ငွေပေးမယ့်ရက် နီးကာမှ နောက်ပြီး ဒီလမှာလည်း အများကြီး ရထားပြီးကာမှ အကုန်ဆုံးရှုံးသွားရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရင်ကွဲမှာ .. 💔💔💔
အခုထိတော့ မဘန်းသေးတာကြောင့် ပြင်ဆင်ချိန် ရပါသေးတယ် 🤝🤝🤝
Credit : Click2donate
အ​ရေး​တော်ပုံ ​အောင်ရမယ် ✊✊✊
Kyaw Nyein Chan December 30, 2021 at 7:28 AM
၁၀ / ၁၅ စက္ကန့် ​ရေတွက်တဲ့ ​ကြော်ငြာ​တွေကို ပြီးဆုံးတဲ့အထိ အ​ပေါ်​ဘေး​ထောင့်မှာ ကြက်​ခြေခတ် ❌ ​ပေါ်လာတဲ့အထိ ကြည့်​ပေးပါ/ ​စောင့်​ပေးပါ
၅ စက္ကန့်မျှသာရေတွက်တဲ့ ​ကြော်ငြာ​တွေကို အ​ပေါ်​ဘေး​ထောင့်မှာ ကြက်​ခြေခတ် ❌ ​ပေါ်လာတဲ့အထိ ကြည့်ပြီး ကြက်​ခြေခတ် ❌ ကို နှိပ်လိုက်ပါ
ဆု December 30, 2021 at 7:34 AM
ko ko zaw December 30, 2021 at 7:43 AM
Kyaw mae yaung December 30, 2021 at 7:55 AM
Unknown December 30, 2021 at 7:57 AM
Lan Bar December 30, 2021 at 8:18 AM
NDA December 30, 2021 at 8:38 AM
Unknown December 30, 2021 at 8:41 AM
Very good post. Thanks alot
Thar Gyi December 30, 2021 at 8:43 AM
World Wide December 30, 2021 at 8:53 AM
TT December 30, 2021 at 9:12 AM
​ကောင်း​သောအရာများကို လိုက်နာကျင့်သုံးပါ့မယ် ဆရာ
Kyaw1972 December 30, 2021 at 9:17 AM
Thu Rein December 30, 2021 at 9:25 AM
Sammi December 30, 2021 at 9:33 AM
လူ​တွေ အ​ပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့က သိပြီ
မင်မင်အ​ပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆရာ 😝😝
May Htoo Sein January 15, 2022 at 7:03 PM
Unknown December 30, 2021 at 10:25 AM
31, Done ❣️💪
မြေ မိုး December 30, 2021 at 1:02 PM
Unknown December 30, 2021 at 2:49 PM
Shop2527 December 30, 2021 at 4:45 PM
Unknown December 30, 2021 at 7:09 PM
hwo December 30, 2021 at 7:10 PM
Unknown December 30, 2021 at 7:55 PM
Unknown December 30, 2021 at 8:02 PM
Than Than December 30, 2021 at 9:25 PM
BoTun December 30, 2021 at 9:56 PM
Hla Hla Nue December 30, 2021 at 9:58 PM
phoophoo December 30, 2021 at 11:25 PM
Candle December 31, 2021 at 1:02 AM
Unknown December 31, 2021 at 1:37 AM
Unknown December 31, 2021 at 4:42 AM
Hlwan Nway Oo December 31, 2021 at 8:07 AM
phoophoo January 2, 2022 at 8:13 AM
Chiyochiyo January 2, 2022 at 10:59 PM
Still clicking,i miss you ako yy
Unknown January 15, 2022 at 5:25 AM
January January 15, 2022 at 5:28 AM
GSMung January 15, 2022 at 5:33 AM
phyo January 15, 2022 at 5:34 AM
Unknown January 15, 2022 at 5:40 AM
Unknown January 15, 2022 at 5:41 AM
စာ​ရေးသူအား ​ကျေးဇူးတင် ​လေးစားပါတယ်ခင်ဗျား။
​လောက​ကျောင်း​တော်ကြီးမှ အတတ်/ပညာများ ဝန်းကျင် အ​တွေ့အကြုံ ဗဟုသုတများ အသိဥာဏ်ပညာများကို အမြဲမပြတ် ဆည်းပူးအားထုတ်လျက် ရိုး​ဖြောင့် မှန်ကန်စွာ
စွမ်​ဆောင်နိုင်သမျှ ​လောကအကျိုး ​ဆောင်ရွက်​နေရုံပါ။ ​သေခြင်း​နောက်ထိ နာမည်မပျက်ယွင်း​စေရဖို့သာ အဓိကပါ ခင်ဗျား။
ACpower January 15, 2022 at 5:52 AM
Unknown January 15, 2022 at 5:58 AM
Unknown January 15, 2022 at 6:03 AM
Clicker(BN) January 15, 2022 at 6:04 AM
မထင်မရှား မထင်မရှားကပဲ့ ထွန်းပေါက်ခဲ့ကြတယ်
မထင်မရှား မထင်မရှား ကနေ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိင်ငံ
Ferdral Democracy ပြည်ထောင်စုစီ
မထင်မရှား လူငယ်တွေကပဲ့ ဦးဆောင်စို့လား💪✅
Nyi latt January 15, 2022 at 6:05 AM
ko Thet January 15, 2022 at 6:09 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 15, 2022 at 6:09 AM
"ပန်း တိုင် ကို သွား ရ တယ် ဆို တာ
Shop2527 January 15, 2022 at 6:13 AM
ACpower January 15, 2022 at 6:25 AM
KoPauk January 15, 2022 at 6:29 AM
Ok par 👍💪
Min min January 15, 2022 at 6:33 AM
They are afraid that we will fall in love with each other. Because they can createaworld beyond their control by loving each other.
Unknown January 15, 2022 at 7:06 AM
Han January 15, 2022 at 7:15 AM
Than Than January 15, 2022 at 7:45 AM
Back kham January 15, 2022 at 8:00 AM
Bumblebee January 15, 2022 at 8:06 AM
Zaw Htwe January 15, 2022 at 8:17 AM
P January 15, 2022 at 9:19 AM
Unknown January 15, 2022 at 3:00 PM
Zin Ko Lwin January 15, 2022 at 5:45 PM
Thet Naung January 15, 2022 at 6:26 PM
Unknown January 15, 2022 at 6:45 PM
Nobel January 15, 2022 at 8:33 PM
San yu January 15, 2022 at 10:39 PM
Unknown January 16, 2022 at 12:19 AM
Unknown January 16, 2022 at 12:27 AM
Yin Mon January 16, 2022 at 3:29 AM
PaPaWaDe January 16, 2022 at 3:30 AM
Mai Kyi Nwe January 18, 2022 at 1:22 AM
Su Khit January 18, 2022 at 5:40 AM
We must win 💯👍👍
VIVO January 19, 2022 at 11:25 PM
yoon January 20, 2022 at 11:32 PM
နံနံပင်အရမ်းကြိုက်တယ် January 21, 2022 at 9:01 AM